शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाबाट डाक्टरहरु आए!आमा बुवाको रुंदा रुंदा आंशु रित्तिसक्यो (भिडियो) - सुदूर नेपाल
शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाबाट डाक्टरहरु आए!आमा बुवाको रुंदा रुंदा आंशु रित्तिसक्यो (भिडियो)
मान्छेको जिन्दगीमा कुन बेला कस्तो आप्पट आइपर्छ भन्ने सकिने रहेनछ । प्युठानका २ बर्षका शिशिर खड्का आफ्नो आमा बुवासंग दंग थिए । कति सुन्दर थियो यो परिवार । तर गएको असारको त्यो घटनाले शिशिरको जीवन मात्रै हैन यो परिवारको खुशी नै खोसिदियो । सानो उमेरमै आफूमाथि आइपरेको यति ठुलो समस्या कुनैदिन त्यो बाबुले पनि थाहा पाउला अनि अनि उसलाई पनि परिकल्पना होला मा माथि त्यो घटना नभएको भए मा कस्तो हुने थिए होला ? हो हामी सानो हुँदा लागेका साना साना घाउहरु त अहिले आएर सम्झिन्चौ भने त्यो बाबुलाई कस्तो होला ?
साथीहरुसंग खेलिरहेका शिशिर पुरी पकाउन उमालिरहेको तेलमा डुबे । पानी लिन गएकी आमा फर्केर आउंदा छोराको त्यो अवस्था देखेर मुर्छा परेर ढलिन् । भारतमा रहेका शिशिरका बुवा खबर थाहा पाउने बित्तिकै घर फर्के । शिशिरका दाई पनि छन् । चरण चरणको अप्रेशनले शिशिरलाई यो अवस्थामा ल्याउन सकियो । खुशीको कुरा शिशिर बांचे तर उनको त्यो सुन्दर अनुहार र शरीर यस्तो भयो । गरिब परिवारले शिशिरको उपचारका लागि हालसम्म १२ लाख भन्दा माथि खर्चिसकेको छ । ऋण गरेर छोराको जीवन बचाएका शिशिरको आमा बुवाको रुंदा रुंदा आंशु रित्तिसक्यो । शिशिरको आमा उनको पहिलेको फोटो हेर्नै सक्दिनन् ।
त्यो दुर्घटनापछि शिशिर झनक्क रिसाउने भएका छन् । आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दै घरभरीका सबै ऐना फुटाईसके । उनलाई आफु भुत जस्तो लाग्छ रे । अहिलेदेखि नै आफ्नो अनुहार प्रति उनलाई ठुलो घृणा छ । यसैबिच शिशिरलाई हेर्न अमेरिकाको न्युयोर्कबाट डाक्टरहरु आएका थिए । किर्तिपुर अस्पतालमा शिशिरलाई हेर्दै उनीहरुले के भने ? के शिशिरको उपचार सम्भव छ ? के प्लाष्टिक सर्जरी गर्न मिल्छ ? त्यसको लागि कति खर्च लाग्छ ?
त्यसको लागि तलको भिडियो हेर्नुस
Previous Post: हार्दिक श्रद्धा सुमन!सम्झनामा किसुन जी
Next Post: २०७५ फाल्गुन २१ गते मङ्गलबारको राशिफल पद्नुहोस ।